Plura Monitors - ၎င်းကိုယုံရန်ကြည့်ပါ။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Plura စောင့်ကြည့် - ကယုံဖို့ကကြည့်ရှုပါ!
Plura အသံလွှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းမော်နီတာမှာသူ့ဟာသူအမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ မော်နီတာသူတို့သို့သော်ပြုပါအားလုံးမဟုတ်, သူတို့ရဲ့ NAB တဲမှာတစ်ချက် #N2718 အဆိုပါ Las Vegas မှာမှာ NAB ပြပွဲ (အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးမြင့်လှည့်ကွက်ဆိုသော်ငြား) တစ်လှည့်ကွက်မြင်းအပေါငျးတို့သအယူအဆတွေပပြောကျသှားပါလိမ့်မည်။ တဲမှာ display ကိုတွင်ကဲ့သို့သော Non-မော်နီတာပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်: စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှတိုင်မားကိုထိန်းချုပ် & ဖော်ပြရန် MTDoE တိုင်မားများအတွက် app တစ်ခု; တစ်ဦး veracious နှင့်တိကျမှန်ကန် Multi-GNSS လက်ခံနှင့် (ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး OB မော်တော်ယာဉ်များတွင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း) ကိုမာစတာနာရီတည်းဟူသော GNS-10MHz module တစ်ခု, အဆိုပါ Ethernet ကျော် useable အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအချိန် display ကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ tabletop များအတွက်စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု timer နေရာမှာအဖြစ်အတူတူထုတ်ကုန်တစ်ခုထိန်သိမ်း-တပ်ဆင်ထားဗားရှင်း။
ဟုတ်ပါတယ်, Plura ရဲ့အဓိကအာရုံစူးစိုက်မော်နီတာအပေါ်ဖြစ်နေဆဲ - ကလည်းမော်နီတာနှင့် display တွေအတွက်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အကြီးမြတ်ဆုံးတိုးတက်မှုတစ်ခုပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပြခဲ့ - က J3K အသံဖမ်းထောကျပံ့ဖို့ခွင့်ပြုသည့် SFP-2G များအတွက်သစ်ကို module တစ်ခုလိုပဲ။ အစဉ်အဆက်အဖြစ်, Plura မော်နီတာကဲ့သို့သောအကြိုက်ဆုံးအပါအဝင်ကျယ်ပြန့်အင်္ဂါရပ်ထား, ထိန်းသိမ်းရန်: အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းနည်းများ, တီထွင်မှုများတိုးမြှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ, 35,000 နာရီပိုလျှံအတွက်အသံအိုင်ပီနှင့်အတူအသံကျယ်နှင့်မျက်နှာပြင်ဘဝ LKFS ။
တစ်ဦး3လက်မအရွယ် LCD မော်နီတာ - ထို PHB-7G စီးရီးမှလတ်တလောထို့အပြင်တစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အိတ်ဆောင်နှင့်စူပါတောက်ပ, တကအားကစားကွင်းများကဲ့သို့နှင့်ပြင်ပတိုက်ရိုက်နေရောင်အောက်တွင်တောက်ပနေရာများအတွက် useable ပါ! တောင်မှအပြင်မှာတိုက်ရိုက်အလင်းရောင်ထဲမှာ, RGB 12-bit မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ဆစ်ဂနယ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်အရောင်ကယ်တင်တတ်၏ စုံလင်သောအရောင်အတွက်မျိုးပွား။ ဟုတ်ပါတယ်, အောက်ပါ SMPTE, EBU နှင့်ဖမ်းယူရေး 709 လမ်းညွှန်ချက်များ - ဘယ်လိုမတတျနိုငျသ? 1300 cd / m2 တကယ်လှည့်ကွက်မ! အိမ်တွင်း Going? တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီး touch နဲ့ 100 သကဲ့သို့အနိမ့်အရောင်ကိုဆင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ လူထုအတွက်တစ်ခရီးဆောင်မော်နီတာများအတွက်, ဒီယူနစ်ကဂျီပီအက်စ်အညွှန်းစနစ်များနှင့်ရေဒါများကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရခြင်းကဲ့သို့သောဒုက္ခပေးတတ်တဲ့နှောငျ့အယှလျစ်လျူရှုရန်ခွင့်ပြု, လြှပျစစျဆန့်ကျင်ကာကှယျဖြစ်ပါတယ်။ သွားလာရင်းအဆိုပါသတင်းအဖွဲ့သည်ဒါကောင်းသောမရှိခဲ့ဘူး!
4K ဖြေရှင်းချက်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ရှာဖွေနေပါသလား Plura သငျသညျဖုံးအုပျရတယ်ခဲ့သည်! အဆိုပါ LCM-4K စီးရီး 3840 အထိကိုထောက်ပံ့ 2160 resolution ကို x ။ , Sharp ကတိကျမှန်ကန်, အသေးစိတ်; သငျသညျအသှေးကိုလိုလျှင်, Plura ထံသို့ လာ. , သူတို့ကနှမြောဖို့ရညျအသှေးရှိသည်! ဒီအစု၏ granddaddy တစ်ခု 84 လက်မအရွယ် screen ရှိပါတယ်သို့သော်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသင့်လျော်သောအရွယ်အစားခွင့်ပြု, အ LCM စီးရီးဝိသေသ Slim ထိန်းသိမ်းထား - အိမ်, ရုံး, ဒါမှမဟုတ်စတူဒီယိုထိုသို့စံပြအောင်။ သဘာဝကျကျ, စီးရီးဟာသူတို့ရဲ့စံကျယ်ပြန့်အင်္ဂါရပ်အစုံတို့ပါဝင်သည်ပင်ထပ်မံ Plura guarantying စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းအစက်အပြောက်စောင့်ကြည့်။ တစ်ခုကအလိုလိုသိစမတ်တီဗီ menu ကိုစံချိန်စံညွှန်းများအားလုံးပါဝင်သည်ပေါင်းထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာအဖြစ် ချိန်ညှိ colorimetry, gamma ဆုံးမခြင်းနှင့်အသံစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။ အဘယ်ကြောင့်ပဲရှိတယ် HD သငျသညျရှိနိုငျသောအခါ က Ultra HD?
ဒီနှစ်မှာတော့၏ Las Vegas show ကိုကျွန်တော်တို့ကို Plura ရဲ့ LCM-207-3G & LCM-209-3G ဆောင်ခဲ့လေ၏။ အဆိုပါ LCM စီးရီးကိုဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပိုင်အများအပြားမျက်နှာသာ features တွေ, အင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထိန်းသိမ်းခြင်းသေးတုန်းပဲတစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းချက်များနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအကူအညီအထောက်အပံ့များများအတွက်စတူဒီယိုရဲ့ရှာဖွေရေးအတွက်တတ်နိုင် option ကိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတူတူတတ်၏။ Plura တစ်ကြိမ်ထပ် succinctly သူတို့တစ်တွေမော်နီတာ-အာရုံစူးစိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုအောင်မြင်ရုံကိုဘယ်လိုပြသသည်။ dual7လက်မနဲ့ dual-9 လက်မအရွယ်မော်နီတာများအတွက်သရုပျဖျောကကူညီပေးခဲ့ NAB ပြပွဲ Plura အကြောင်းကိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောင့်ကိုအဘယျသို့တက်ရောက်။ တသမတ်တည်းအရည်အသွေး, တနျဖိုး, သူတို့ထုတ်လုပ်အရာအားလုံးထဲမှာကြာရှည်ခံမှု။ အဆိုပါ LCM စီးရီးတတ်နိုင်မော်နီတာတစ်ခုအကွာအဝေးတင်ဆက်နှင့်၎င်းတို့၏ In-depth ကိုအရောင်စံကိုက်ညှိနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ပူးတွဲတင်ပြထားသကဲ့သို့, Higher-အဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ features တွေဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆိုပါ dual-screen ကို function ကိုအသုံးပြုသူများသည်အရည်အသွေးဟာသူတို့ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနေ, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံသမာဓိရှိအလွယ်တကူလိုက်ဖက်နှင့်မျက်နှာပြင်-to-screen ကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ Plura thoughtfully ယှဉ်ပြိုင်မယ့်ဘေးထွက်-by-side နှိုင်းယှဉ် preview ကိုမော်နီတာချို့တဲ့ရသောအမှုသည်ဖြစ်ကြောင်းတချို့ features တွေထည့်သွင်းတော်မူပြီ ဤအနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ပါဝင်များအတွက်ဖောက်သည်ကိုပိုမိုကုန်ကျကြောင်းစံနှင့်မအချို့သောမှို-On (သေးလိုအပ်သော) အင်္ဂါရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အဆိုပါ dual-မော်နီတာယူနစ်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီမျက်နှာပြင် 4x SDI output ကို,2x ကို sports HDMI,2RGB x,6ပေါင်းစပ် x, &2က S-Video x ။
ဤရွေ့ကား2ယူနစ်ချိန်-in ကိုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် svelte 5½ &7မှာအသီးသီး POUNDS ။ အဆိုပါ LCM စီးရီးတစ်ခုအဆင့်မြင့် feature ကိုထားရှိပါတယ် အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်အဘို့အခြမ်း-by-side နှိုင်းယှဉ်အာရုံစိုက်တဲ့စက်ပစ္စည်းအတွက်မလိုအပ်သောရှိသမျှသောသူတို့အား features တွေထွက်ချုံ့ခြင်းနေစဉ်အကြောင်း, တစ်ဦးချင်းစီယူနစ်နှင့်အတူစံလာသည်။ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအရောင်အဖြစ် Ethernet-နိုင်စွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကွန်ရက်ကအလွယ်တကူနေရာချပေးနေသည်နှင့်မော်နီတာလည်း, အဖြူရောင်ဖြာထွက်အဆင့်ကိုကဲ့သို့သောအရာများကိုအကိုတိုင်းအရောင်အပူချိန်နှင့် Gamma, ပြောင်းလဲနေသောသို့မဟုတ်ငြိမ် UMP နဲ့တာလီချိုးနှင့် PIP ။
Plura အသံလွှင့် လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းထိပ်နှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်လာသည် HD နဲ့ SD LCD ကိုဗီဒီယိုကမော်နီတာ; သူတို့၏မြင့်အဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းထုတ်လွှင့်နှင့်အတူ၎င်း၏နယ်ပယ်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ သငျသညျဖြင့်ရပ်တန့်တို့ကိုထုတ် check လုပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ NAB တဲအတွက်တစ်ဦးက peek သင်တို့အဘို့အကြောင်းအယူအဆခိုင်မြဲရန်ကူညီပေးခဲ့ပေသည်။
ဒါကကျနော်တို့စတူဒီယို Beat အသံလွှင့်မှာ Plura မော်နီတာပေမယ့်ဘာမျှကိုအသုံးပြုဖို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကပါ! အကောင်းဆုံးသောတည်ရှိသည့်အခါ, အဘယ်ကြောင့်အရာအားလုံးထက်အသုံးပြုသနည်း
2015 NAB ပြရန် MTDoE တိုင်မားများအတွက် app ကို ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ မော်နီတာထုတ်လွှင့် ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Multi-GNSS လက်ခံနှင့်မာစတာနာရီ NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2015 NAB NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး အဆိုပါ SFP-3G အသစ် module တစ်ခု Plura Plura ရဲ့ LCM-207-3G & LCM-209-3G အဆိုပါ J2K အသံဖမ်းထောကျပံ့ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-04-28
ယခင်: ဒဏ္ဍာရီအသံအင်ဂျင်နီယာများ & ထုတ်လုပ်သူများတေးဂီတကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူသူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှု Share ဖို့အွန်လိုင်းသင်တန်းများတိုးမြှင့်
နောက်တစ်ခု: Vidcheck အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်ဟင်နရီ Keyser ခန့်အပ်